Warar Ka Soo Baxaya Ciidammo Maanta Qabsaday Xarunta Baarlamaanka Puntland | Dhamays Media Group
Warar Ka Soo Baxaya Ciidammo Maanta Qabsaday Xarunta Baarlamaanka Puntland
Garoowe (Dhamays) – Ciidamo ka tirsan kuwa Maamulka Puntland, ayaa Maanta la wareegay Xarunta Barlamaanka Puntland ee Magaalada Garoowe, xilli aanay ka soconin wax kalfadhi ah oo ay lahaayeen Xildhibaannadu, wallow ay ku sugaanaayeen Xilligaasi Xarunta Baarlamaanka Xildhibaano kooban iyo shaqaalihii barlamaanka.
Ciidamadan oo watay baabuurta gaashaaman, kuna hubaysnaa hub culus ayaa xanibay jidka dheer ee Laamiga ee hor mara barlamaanka, iyagoo joojiyay isu-socodkii baabuurta iyo dhaqdhaqaaqii waddada ugu muhiimsan caasimadda Puntland ee Garoowe.
Ciidamadan oo aan la hadlin warbaahinta, isla-markaana aan la faahfaahin guutadada ay ka tirsan yihiin iyo masuuliyiinta xukunta ayaa warar ku dhow waxay sheegayaan inay ka cabanayaan Mushahar la’aan iyo xuquuqo kale oo kaga maqan Maamulka Puntland.
Ma Cadda in qabsashada ciidamada ee xarunta barlamaanku ay tahay farriin loo dirayo xildhibaanada Baarlamaanka oo ah in culays lagu saaro in ay tallaabo ka qaataan xaaladda waddanka ka taagan, sababta loo bartilmaameedsaday xaruntoodii kaliya oo ayna ciidamadu u qabsan bangiga iyo Wasaaradda Maaliyadda oo dhinac ku haya xarunta Barlamaanka ee Garoowe.
Dadka qaar ayaa sheegayaa in qabsashada baarlamaanku ay la xidhiidho howlgal ay dowladdu soo abaabushay oo lagaga hortegayay xildhibaano gadoodsan oo ku sugnaa xarunta baarlamaanka ee Garoowe, kuwasoo diyaarinayay kacdoon lagu ridayo Xukuumadda uu hoggaamiyo Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali (Gaas).
Xiliga ciidamada goobta yimaaddeen ayaa waxaa gudaha xarunta Baarlamaanka ku jiray tiro xildhibaano ah oo gaadhaya 10, kuwaasi oo la rumeysan yahay inay kamid yihiin kuwa qorsheenayey mooshinka ka dhan ah Xukuumadda Puntland.
Arrintan waxay ku soo beegmaysaa maalin ka hor markii Wasiirkii hore ee Maaliyadda Puntland Faarax Cali Shire oo ka hadlay Warbaahinta isla-markaana eedaymo culus u soo jeediyay maamulka Madaxweyne Gaas, oo uu ku tilmaamay xaaladda Puntland mid burbur ah. Siyaasigan ayaa muddo 5 sanno wuxuu ahaa Wasiirkii Maaliyada ee Xukuumaddii Faroole,
Ciidamadii la wareegay Xarunta Baarlamaanka ayaa Maanta gelinkii danbe halkaasi ka tagay, iyagoo dib ugu noqday xeryahooda, waxaana la sheegay in ay go’aankan qaateen kadib markii uu goobta ay ku sugnaayeen booqday Islaan Ciise Islaan Muuse oo kamid ah Issimada Puntland iyo gobolka Nugaal.
Ciidamadan ayaan wax dhibaato ah geysan marka laga reebo xarunta Baarlamaanka oo ay isku gedaameen iyo waddooyinka goobtaasi hormara oo ay xidheen saacado kooban.
Sannadkii hore, ayaa sidan oo kale waxa Ciidamo la sheegay inay Mushahar la’aan ka cabanayeen waxay qabsadeen Baanka dhexe ee Puntland ee ku yaalla Magaalada Garoowe.
Previous: Garabkii Haweenka Ee Xisbiga WADDANI U Qaabilsanaa Gobolka Awdal
Next: “Muuse Biixi Waxaan Ku Doortay Waa Nin Go’aan Qaadan Kara Oo Aan Mus-dambeed Lahayn..” Seed